एक प्रहरीको मृत्यु, एसपीसहित १८ जनाको अवस्था गम्भीर, कसरी घट्यो घटना ? — Imandarmedia.com
एक प्रहरीको मृत्यु, एसपीसहित १८ जनाको अवस्था गम्भीर, कसरी घट्यो घटना ?
काठमाडौ। विद्यार्थीमाथि यौन दुर्व्यवहार गरेको आरोप लागेका शिक्षकलाई कारबाहीको माग गर्दै आन्दोलित स्थानीयले आक्रमण गर्दा मोरङमा एक महिला प्रहरीको मृत्यु भएको छ।
लेटाङ नगरपालिका– ५ स्थित शिक्षा विकास माध्यमिक विद्यालयका शिक्षक ५६ वर्षीय मनोज पौडेलले कक्षा ७ मा अध्ययनरत छात्रामाथि यौन दुर्व्यवहार गरेको घटना सार्वजनिक भएपछि आइतबार स्थानीय आन्दोलित बनेका थिए।
त्यसैक्रममा विद्यालय पुगेका प्रहरी टोलीले शिक्षक पौडेललाई विद्यालयभित्रै सुरक्षा दिएपछि स्थानीय आक्रमणमा उत्रिएका थिए। आक्रमणबाट प्रहरी जवान उर्मिला श्रेष्ठको मृत्यु भएको हो ।
प्रदेश १ प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता एसपी नवीन राईले आक्रोशित स्थानीयबाट श्रेष्ठको घाँटीमा धारिलो हतियारले प्रहार भएको जानकारी दिए। श्रेष्ठलाई अस्पताल पु र्‍याएलगत्तै कोशी अञ्चल अस्पतालका चिकित्सकले मृत घोषणा गरेका थिए।
उनी दंगा नियन्त्रण गण दुहवी सुनसरीमा कार्यालय थिइन्। झडपमा मोरङ प्रहरी प्रमुख एसपी जनार्दन जिसीसहित १८ प्रहरी घाइते भएको एसपी राईले बताए । दुई स्थानीय पनि घाइते भएको उनको भनाई छ।
लेटाङ नगरपालिकाकी उपप्रमुख कृष्णकुमारी निरौलाका अनुसार शिक्षक पौडेलले कक्षा ७ मा अध्ययनरत छात्रामाथि बारम्बार यौन दुरव्यवहार गरेको घटना सार्वजनिक भएपछि आइतबार बिहानैदेखि लेटाङ तनावग्रस्त बनेको थियो।
ती शिक्षकले ४ फागुनमा फागु पूर्णिमाको दिन बालिकाको घरमै पुगेर पनि बलात्कार प्रयास गरेको उपप्रमुख निरौलाले बताइन्। आइतबार विद्यालय खुलेपछि पीडित बालिकाले रुँदै विद्यालयका अर्का शिक्षकलाई घटनाबारे जानकारी गराएकी थिइन्।
त्यसक्रममा अन्य विद्यार्थीले पनि सुनेका थिए । त्यसपछि विद्यार्थी र घटना थाहा पाएका स्थानीय आक्रोशित भएका थिए। उनीहरूले विद्यालयमा तोडफोड र आगजनी गरेको मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी काशीराज दाहालले बताए।
उपप्रमुख निरौलाले ती शिक्षकले यसअघिदेखि नै बालिकामाथि यौनजन्य हिंसा गर्ने गरेको आफूलाई जानकारी आएको बताइन् । ती शिक्षकले पहिलेदेखि नै ती नानीमाथि गलत दृष्टि लगाएका रहेछन्।
आमा नभएकी नानीलाई अनेक बहानामा दुव्र्यवहार गर्ने गरेका रहेछन्। होलीको दिन घरमै गएर बलात्कार प्रयास गरेछन्। आइतबार नानीले विद्यालयका अर्का शिक्षकलाई रुँदै सुनाउने क्रममा सबैले थाहा पाएपछि अप्रिय घटना भयो ।
दिनभर तनावग्रस्त बनेको लेटाङको अवस्था राति ९ बजे मात्र नियन्त्रणमा आएको उपप्रमुख निरौलाले बताइन् । स्थितिलाई नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले हवाई फायर र अश्रु ग्यास प्रहार गरेको प्रदेश–१ प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता एसपी राईले जानकारी दिए।
सो क्रममा प्रहरी र स्थानीयबीच दाहोरो झडप पनि भएको उनले बताए। प्रहरीले आरोपी शिक्षकलाई आइतबारै नियन्त्रणमा लिएको छ। कसरि घट्यो लेटाङ घटना ?
एसपी जनार्दन जिसी, मोरङ । आइतबार लेटाङको शिक्षा सेवा माविका शिक्षक मनोज पौडेलले एक छात्रामाथि यौ’न दुर्व्यवहार गरेको आरोप लाग्यो। आरोप लागेपछि प्रहरीलाई पनि खबर आयो र स्थानीय लेटाङ इलाका प्रहरी कार्यालयबाट प्रहरी टोली आरोपित शिक्षकलाई पक्राउ गर्न भनी गएको थियो ।
राति करिब ९ बजेतिर भिड बिस्तारै हट्दै गएपछि प्रहरी पनि आ–आफ्नो कार्यालयमा फर्किने क्रम जारी थियो। त्यही क्रममा हाम्रो प्रहरी जवान उर्मिला श्रेष्ठ लगायतको टोली पनि फर्किँदै थियो । फर्कने क्रममा विद्यालय नजिकै झाडीमा लुकेर बसेको उग्र युवाहरुको समूहले एक्कासी ढुङ्गामुढा गर्न थाले।
सुकुमबासी बस्तीका युवाहरु पनि थिए आक्रोशित: आन्दोलनका क्रममा त्यसक्षेत्रमा रहेका सुकुमबासी बस्तीका युवा बढी आक्रोशित देखिएका थिए । अधिकांश युवाको शैक्षिक स्तर कमजोर रहेको र बेरोजगार पनि रहेका कारण कैयन् युवा कुलत वा अपराधमा पनि संलग्न रहेको बिगतका घटनाले देखाएका छन् । प्रहरीले पक्राउ र धरपकड गरेको कारण त्यस्ता युवा पनि प्रहरीप्रति नकारात्मक भएको हुनसक्ने हामीले अनुमान गरेका छौँ । त्यही कारणले युवाहरुले प्रहरीलाई नै निसाना बनाएको पो हो कि भन्ने सम्बन्धमा पनि अनुसन्धान भइरहेको छ ।
राजनीतिक कारणबारे पनि खोजी जारी: आइतबार प्रहरीमाथि नै आ’क्रमण हुनुको अर्को कारण राजनीतिक कारण पनि हो कि भनेर अनुसन्धान गरिरहेका छौँ । चुनावको मिति घोषणा भइसकेका कारण चुनावमा आफू अनुकुलको नतिजा निकाल्न पनि यसप्रकारको अपराध हुनसक्छ भन्ने कोणबाट पनि हामीले अनुसन्धान गरिरहेका छौँ ।
अर्को कुरा, आरोपित शिक्षकको राजनीतिक आस्था रहेको राजनीतिक दल र आक्रोशित अधिकांश भिडले आस्था राख्ने राजनीतिक दल पनि फरक हुनसक्छ, त्यही कारण राजनीतिक दाउपेचका कारण पनि भिड उग्र बनेको हुनसक्छ । यीबारे पनि हामी खोजी गर्दैछौँ।
प्रहरी चुकेको बचाउन नसक्नुमा मात्रै हो: तपाइँले प्रहरी कहाँ चुक्यो भनेर भन्नुभयो भने प्रहरी अन्त कतै चुकेको छैन । प्रहरीको अनुमान भनेको भिडले आरोपितलाई आक्रमण गर्न सक्छ भन्नेमात्रै थियो । भिडले प्रहरीमाथि नै आक्रमण गरेर ज्यान नै लेला भन्ने लागेको थिएन, त्यही अनुमानमा हामी चुकेका हौँ। नत्र प्रहरी दिनभर संयम भएकै हो । प्रहरीमाथि नै आक्रमण भएर मृत्यु हुँदासमेत प्रहरी संयम नै रहेको छ।
यदि प्रहरी चुक्ने र संयमता गुमाउने हो भने अर्को दुर्घटना पनि हुन सक्थ्यो । त्यसकारण भिडबाट हुनसक्ने आक्रमणबारे सचेत हुन नसक्नुबाहेक प्रहरी अन्यत्र कहीँ चुकेको छैन। अपराधी र आपराधिक समूहको योजनाबारे प्रहरी जानकार थिएन, त्यही नै प्रहरीको कमजोरी भयो । (रातोपाटीबाट साभार)